पूर्वडिआईजीको विश्लेषण, किन भइरहेछ बम आतंक ? | Everest Online News
भन्सार अधिकृतको अवैध सम्पत्ती : अख्तियारले दायर गर्यो मुद्दा ।
महिला साफ खेलमा नेपालको हार ।
साफ खेल अपडेट ।
तालिवानद्वारा अफगानिस्तानमा आक्रमण ।
कपोकल्पित र भ्रामक समाचारको पछी नलाग्न नेपाली सेनाको बिज्ञप्ती ।
डिसेम्बर 5, 2017
पूर्वडिआईजीको विश्लेषण, किन भइरहेछ बम आतंक ?
Reporter: नेपाल प्रहरी
पछिल्ला दिनहरुमा चुनाव केन्द्रित श्रृंखलाबद्ध विस्फोटका घटनाहरु सरकारकै कमजोरीका परिणाम हुन् । एकवर्ष अघि नै विप्लव समूहले राजधानीमा खुलेआम सभा गर्दै आफूहरु चुनाव विरोधी रहेको बताएको थियो । उक्त पार्टीले आफ्नो काम अगाडि बढाउन सैन्य रणनीति बनाइरहेको बारे सरकार र सुरक्षा अधिकारीहरु पनि जानकार थिए ।
त्यतिबेला नै सरकारले उक्त समूहलाई हेर्ने स्पष्ट नीति बनाउन नसक्नुको परिणाम पछिल्ला घटनाहरु हुन् । सरकारले मौनता साँधेर उक्त समूहलाई निर्वाध गतिविधीहरु गर्न छुट दियो । सुरक्षा अधिकारीहरु सरकारको निर्देशन नपाएको भन्दै विप्लब समूहलाई नजरअन्दाज गरिरहे । जसले गर्दा उनीहरुले आफ्नो गतिविधी जारी राख्न पाए ।
स्थानीय तहको निर्वाचनको क्रममा पनि ठूलो संख्यामा विप्लब माओवादीका नेता कार्यकर्ता पक्राउ परेका थिए । तर तिमध्ये अधिकांशमाथि सार्वजनिक अपराधमा मद्दा चलाइयो र सबैजसो केही हजार धरौटी बुझाएर चुनाव लगत्तै छुटे । त्यसरी छुटेकाहरुको मनोबल पछिल्लो निर्वाचनमा झनै उच्च भएको देखिन्छ । स्थानीय तहको निर्वाचन शान्तिपूर्णरुपमा सम्पन्न गराइयो भनेर सुरक्षा निकायले पनि आसन्न गम्भीरतालाई ध्यानपूर्वक हेरेनन् । स्थानीय तहको निर्वाचनजस्तै अवस्था रहने उनीहरुको आँकलन श्रृंखलबद्ध विस्फोटपछि फेल खाएको देखियो ।
प्रहरीमा गतिलो र गम्भीर सूचनाको अभाव पनि देखिन्छ । सतहीरुपमा प्राप्त सूचनामा भरपर्ने र त्यस्तो सूचना पाउनेबित्तिकै त्यसको आधिकारिकता पुष्टी नगरी उच्च राजनीतिक नेतृत्वमा रहेकाहरुमा जाहेर गरेर साखुल्ले बन्न खोज्ने प्रवृत्ति पनि देखिन्छ ।
विप्लब समूहको अहिलेको शैली राजनीतिक भन्दा फरक प्रकृतिको छ । पहिलो संविधानसभाका बेला मधेसमा ७५ वटा शसस्त्र हिसांत्मक समूहहरु थिए । पूर्वी पहाडमा मात्रै ६२ वटा शसस्त्र समूहहरु थिए । त्यतिबेला शसस्त्र समूहले हिंसा गर्थे र जिम्मेवारी लिन्थे । तर अहिले त परिस्थिति फरक छ । विस्फोट भइरहेका छन् तर विप्लव माओवादी राजनीतिक शक्ति हो कि शसस्त्र शक्ति हो भन्ने नै खुलाइएको छैन ।
प्रहरीमा गतिलो र गम्भीर सूचनाको अभाव पनि देखिन्छ । सतहीरुपमा प्राप्त सूचनामा भरपर्ने र त्यस्तो सूचना पाउनेबित्तिकै त्यसको आधिकारिकता पुष्टी नगरी उच्च राजनीतिक नेतृत्वमा रहेकाहरुमा जाहेर गरेर साखुल्ले बन्न खोज्ने प्रवृत्ति पनि देखिन्छ । यसले पनि सुरक्षा चुनौतिलाई सहीरुपमा सम्बोधन गर्नबाट रोकेको देखिन्छ ।
सरकारले स्पष्ट आदेश नदिंदा पनि विप्लव माओवादीका उच्च नेताहरु पक्राउ पर्न सकेका छैनन् । सुरक्षा निकायबीचको कमजोर अन्तर निकाय समन्वय र अस्पष्ट सरकारी निर्देशनले गर्दा निर्वाचन सुरक्षा कमजोर बनेको छ ।
स्थानीय तहको निर्वाचनमा भन्दा पहिलो चरणको प्रतिनिधी सभा र प्रदेश सभामा कम मत खस्यो । सुरक्षा व्यवस्था अझै कमजोर भयो भने दोस्रो चरणमा झनै कम मत खस्न सक्छ ।
निर्वाचन सुरक्षामा खटिएका शसस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरीबीच पनि समन्वयको अभावजस्तो देखिन्छ । पर्याप्त सूचनाको अभाव र समन्वयको अभावमा प्रभावकारी कदम चाल्न सकिएको छैन । राजनीतिक दलहरुमा पनि विप्लब माओवादीलाई हेर्ने प्रस्ट दृष्टिकोण देखिन्न । कुन पार्टीसँग कतिबेला राजनीतिक स्वार्थका निम्ती गला जोडनुपर्ने हो उनीहरुलाई नै थाहा छैन । त्यही भएर पनि होला विप्लब माओवादीलाई चिढ्याउने पक्षमा राजनीतिक दलहरु पनि देखिएका छैनन् ।
नेपाल प्रहरीका पूर्व डिआईजी अधिकारीसँग जनकराज सापकोटाले गरेको कुराकानीमा आधारित ।
प्रकाशित: मंसिर १९, २०७४
गुगलले पक्रियो मोबाइल फोनबाट जानकारी चोर्ने एप
प्रत्यक्षतर्फको मतपरिणाम ४ दिनभित्रै
मार्च 2019 (45)
Arsenal (8) Barcelona (10) Brazil (10) Chelsea (11) Cricket (26) Cricket Association of Nepal(Can) (19) Fifa world cup (12) Football (9) India (18) Kathmandu (73) KP Oli (24) Manchester United (14) Nepal (12) Nepal Cricket (25) Nepali Cricket Team (14) Nepal Police Club (8) Neymar Jr. (8) One Day Cricket (12) PM Kp oli (15) Political News (13) Real Madrid (14) Ronaldo (12) Sarakar (10) Sher Bahadur Deuba (11) Sports News (8) T20 Cricket (13) अर्थ/ बाणिज्य (12) चुनाव (48) निर्वाचन (15) नेकपा (9) नेकपा एमाले (44) नेकपा माओवादी केन्द्र (8) नेपाल (19) नेपाल प्रहरी (9) नेपाली कांग्रेस (29) प्रचण्ड (15) प्रतिनिधिसभा (11) बाम गठबन्धन (34) मतगणना (41) मतदान (8) माओवादी (21) माओवादी केन्द्र (10) मुख्य खबर (8) मुख्यमन्त्री (11) राजनीति (25)